Sida loo doorto monitor a?
aad halkan: Home Talooyin Sida loo doorto monitor a?
In dunida maanta, hoogtay, inta badan waxay leeyihiin siyaabo kala duwan si ay u ilaaliso naftaada iyo kuwa aad jeceshahay ka shucaac loo baahnayn. Laakiin waa arrin adag, maxaa yeelay, rays kuwanu waa la arki karin oo dismo. Joogitaanka iyo dhaqdhaqaaqa deegaan gudaha cabbiro karaa oo kaliya ee shucaac qoyska.
On khatarta caafimaadka, taas oo ay wejiga siin kari joogo noqnoqda ee aagga la shucaaca sare, uga cabsan weydeen inaad. Sidaa darteed waxa fiican in aad naftaada ilaaliso oo qoyskaaga ka ilaaliyo.
Shucaac guriga - qalab si caddaalad ah oo fudud, Powered by counter Geiger. Waxaa cabiraya shucaaca asalka hawada, waxyaabaha, maadooyinka kala duwan. Uu xogta waa heer sare ah oo sax ah, laakiin si ay u isticmaalaan guriga waa ku filan. Oo weliba, waa wax aad u sahlan in la fahmo nin-laawe.
Maxay waa in aad lacag bixisid si aad fiiro, qaadaaya shucaac qoyska?
Waa in aad si cad u, Isticmaalka qalabka.
Fiiro gaar ah tirada iyo noocyada dareemayaal. Waxay ku xidhan tahay dareen qalab.
Shayga waa in uu la socdaa shahaado ku haboon ee tayada.
qalabka waa in ay is haysta oo ku haboon, si aad u qaadan kartaa iyaga la aan wax dhibaato ah.
hawlaha optional Available, taas oo fududayn doona cabbirka.
guriga shucaac waa wax fudud in ay ku shaqeeyaan, waa ay fududahay in ay bartaan in ay isticmaalaan.
Waa inaad taxadar, waxa loo isticmaali karaa ujeeddooyin sida:
Cabbiraad ee shucaaca jeeda qolka ama dariiqyada;
helitaanka hubinta ee canaasiirta radioactive ee cuntada;
hubiyo shucaaca radioactive ka shey kasta.
ka hor, aad bilowdo in aad cilmi, Waxaan u baahan nahay in la xasuusto, dabiiciga ah in mar walba jooga shucaaca asalka dabiiciga ah, taas oo loo baahan yahay oo u sir la'aada caafimaadka. Laakiin ay xad-qaadi karaan cawaaqib adag.
Si loo baaro heerka shucaaca la isticmaalayo shucaac qoyska, waa in:
Daar qalabka. Dib u celi qiyaasta muujiyay baadhitaan cusub, haddii loo baahdo.
Haddii aad rabto si ay u sahamiyaan meel bannaan oo u furan (wadada, maxkamad, meel kasta oo), raac, si qalabka aan ku saxaroodaan. Haddii goobta imtixaanka - qolka, cilmi baaris badan oo ka mid ah goobaha ay - u dhow derbiyada, Bartamaha, saqafka.
Haddii aad rabto si ay u sahamiyaan shay ama cunto soo saarka ah, Ku hay qalabka sida ugu dhow ee suurto gal ah in ay. Waxaad si toos ah qaban karin cabbirka kuwan dukaanka ama suuqa, ka hor iibka suurto gal: waa si degdeg ah oo waa arrin ku haboon.
wax noocan yar aad noqon doonaa caawiye lagama maarmaan ah.
Miyuu ilaaliyo caafimaadkooda iyo dadkoodii ay jeclaayeen.
ilkaha. Sida loo doorto rugta xaq ilkaha
xiiro Haweenka – sida loo doorto?